Development Network for Immigrants ─ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသားသစ်ညီအမများဝမ်းနည်းဖွယ်အခြေအနေကိုရေးသည် လ.ဝ.က. စာပေ၏ပထမဆုကို ရရှိခဲ့သည်
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသားသစ်ညီအမများဝမ်းနည်းဖွယ်အခြေအနေကိုရေးသည် လ.ဝ.က. စာပေ၏ပထမဆုကို ရရှိခဲ့သည်
Date : 2019/11/4
Updated : 2019/11/11 下午 04:21:00
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသားသစ်ချိန်စစ်ကွေ့သည် လ.ဝ.က.စာပေဆု 6ကြိမ်မြောက် ပထမဆုကိုရရှိ သည်၊ လက်ရာ「အဲ့ဒီနှစ်，မေဟွားပွင့်」အိမ်တွင်း အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် စိတ်ရောဂါခံစား နေ ရသည့်နိုင်ငံသားသစ်ကို ရေးသားဖော်ပြသည်၊ ကလေးများနှင့်ခွဲ၍ ဗီယက်နမ်သို့အတင်းအဓမ္မ ပြန်ပို့ခံရသည်၊ချိန်စစ်ကွေ့က တစ်မြို့တည်းညီအမများ၏ရက်စက်မှု အတွေ့အကြုံများရေးခဲ့ပြီး လူအများနားလည်နိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်
6ကြိမ်မြောက်လ.ဝ.က.စာပေဆိုင်ရာဆုချီးမြှင့်ပွဲကို ယနေ့ကျားယိခရိုင် အားလီစန်း အမျိုးသား သစ်တောအပန်းဖြေနေရာ ရှမ်းလင်စိန်မုရင်ပြင်တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ပထမဆုကို ချိန်စစ်ကွေ့ ၏ 「အဲ့ဒီနှစ်，မေဟွားပွင့်」လက်ရာဖြင့်ရရှိခဲ့သည်။
ချိန်စစ်ကွေ့ ဆုရသည့်ခံစားချက်ကိုပြောရာတွင် ဗီယက်နမ်ညီအမများ ထိုင်ဝမ်လူ့အဖွဲ့အစည်းသို့ ဝင်ရောက်ရန်မလွယ်ပါ။သူမက ဤဇာတ်လမ်းမှတဆင့် နိုင်ငံသားသစ်များ၏ အခြေအနေကို လူအများပိုမိုသိရှိရန် မျှော်လင့်ပါသည်။
ချိန်စစ်ကွေ့သည်2015ခုနှစ်တွင် ထိုင်ဝမ်သို့လက်ထပ်၍ရောက်လာပြီးနောက် တစ်မြို့တည်း ညီအမများစွာ၏ရက်စက်မှုကိုကြားခဲ့သည်။ ကျောင်းအပ်နောက်ဆုံးရက် မတိုင်မီ2ရက်တွင် စတင်ရေးသားခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာစိတ်ထဲတွင်မြုပ်နှံထားသော ဤပုံပြင်စာသား၊ ဆုံးရှုံးသွား သောဘဝကို အသံတိတ်တိုင်ကြားခြင်းဖြင့်အစားထိုးသည်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူများ မည်သည့် နေရာမှလာသည်ဖြစ်စေ ကြင်နာကြရန် ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
「အဲ့ဒီနှစ်，မေဟွားပွင့်」ချိန်စစ်ကွေ့၏ဇတ်လမ်းကို အခြေခံ၍ဗီယက်နမ်တောင်ပိုင်းရေမြို့ နောက် ခံ မိန်းကလေးတစ်ဦးသည် မည်သူ့ကိုမျှချစ်မြတ်နိုးခြင်းမရှိသော်လည်း ဘဝပူပြင်းခဲ့သည်။ ဇတ် လမ်းက ဘဝနှစ်ခုနှင့်အမျိုးသမီးမျိုးဆက် နှစ်ဆက်လုံးရဲ့နာကျင်မှုကို ပြောပြခဲ့သည်၊ အမေနှင့် သူ့သမီး အခက်အခဲတွေနှင့်ဘဝကို စွန့်လွတ်ခဲ့သည်။
1987ခုနှစ်တွင်မွေးသည့်ချိန်စစ်ကွေ့ ဗီယက်နမ်မြောက်ပိုင်းထိုက်ဖျင်ပြည်နယ်မှလာ၍လက်ရှိ ဖျင်တုန်းတွင်နေထိုင်ပြီးဗီယက်နမ်စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ထားသည်။ခင်ပွန်းသည်က ငါးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းကိုလေ့လာ၍ဗီယက်နမ်တွင်အလုပ်လုပ်ပြီးနောက် သူတို့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်လာသည် လက်ထပ်ကလေးမွေးပြီးဗီယက်နမ်တွင်နေထိုင်လိမ့်မည်ဟုထင်ခဲ့ကြသည်၊ သို့သော်ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကျဆင်းလာသောကြောင့် ခင်ပွန်းနှင့်အတူ ထိုင်ဝမ်သို့ပြန်လာခဲ့သည်။
ချိန်စစ်ကွေ့ ကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်စိတ်ရှိခြင်း၊ လွန်ခဲ့သော4နှစ်ကအကြောင်းပြော၊ ကိုယ်တိုင်ထိုင်ဝမ် နေထိုင်မှုဘဝအတွေ့အကြုံပေါင်းစည်းရန်၊ ကျွန်းပေါ်ရှိရွှေ့ပြောင်းနိုင်ငံသားညီအမ ဝမ်းနည်းဖွယ် ပုံပြင်များက သက်သေခံခဲ့သည်။「ကြိုစား」、「နားလည်」、「သည်းခံ」ဤ3ချက်ကို သင်ယူ ခဲ့ရသည်။
ချိန်စစ်ကွေ့ပြောတယ် ကိုယ်တိုင်စိတ်ကူးယဉ်တတ်သူ၊ ပျော်လွယ်ဝမ်းနည်းလွယ်သူပါ။ ဒါကြောင့် ကျမရဲ့ခံစားချက်တွေကို ပေါက်ထွက်တဲ့ပိုက်အဖြစ်မကြာခဏရေးလေ့ရှိသည်။ဒါပေမဲ့ ဒီတစ်ခါ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်မရေးချင်ဘူး၊ ညီအမတွေရဲ့ပုံပြင်တွေကိုလည်းနားမထောင်ချင်ဘူး၊ သူတို့ တွေနဲ့သာ ငိုနိုင်ပါသည်။
သူမက：「ဒီဇာတ်လမ်းကိုကျမရေးခဲ့တယ်၊ ငါတို့အတူတကွနားလည်ပြီးသည်းခံနိုင်မယ်မျှော်လင့် ပါတယ်၊ ဒီချစ်လှစွာသော ကျွန်းပေါ်တွင် အားယွဲ့ကဲ့သို့သောဝမ်းနည်းဖွယ်သီချင်းများ ထပ်မပေါ် စေရန် အတူတကွ ဂရုစိုက်ကူညီခြင်းကပိုကောင်းသည်။
ချိန်စစ်ကွေ့ က ထိုင်ဝမ်လူ့အဖွဲ့အစည်းလက်ရှိကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု၊ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ငံသား၊လုပ်သား များ နေထိုင်မှုဘဝ ပိုမိုလွယ်ကူစွာပေါင်းစပ်နိုင်မည်။「အဲ့ဒီနှစ်，မေဟွားပွင့်」ဇတ်ကောင် အားယွဲ့ရဲ့ဝမ်းနည်းဖွယ် အခြေအနေကို သူမထပ်မံ မကြည့်လိုတော့ကြောင်းယုံကြည်သည်။ (အယ်ဒီတာ：ကျန်းရာကျင့်)